पोखरामा गुहेश्वरी मर्चेण्टको शाखा | NepalDut
पोखरामा गुहेश्वरी मर्चेण्टको शाखा
भाद्र १९ गते २०७७
फाइनान्सका गण्डकी प्रदेश कार्यालयका क्षेत्रीय प्रबन्धक विज्ञान गौतमका अनुसार न्यूरोड पोखरामा शुरु भएको यो २० औं शाखाको सुरुवातपछि संस्थाको देशभर २० वटा शाखा र २ वटा एक्सटेनसन काउन्टरहरु संचालनमा आएका छन् ।
यस वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी तथा जगेडा कोषमा रु. १ अर्ब १९ करोड छ । साथै निक्षेप संकलन रु. ५ अर्ब १३ करोड तथा कर्जा लगानी रु. ३ अर्ब ७९ करोड प्रवाह भएको छ भने कुल नाफा रु. ९ करोड ६६ लाख छ ।
हरिहरभवन, ललितपुरमा प्रधान कार्यालय रहेको संस्थाको प्रदेश नम्बर एकमा ४ वटा, प्रदेश नम्बर दुईमा ५ वटा शाखा कार्यालय र १ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर छन् । बागमती प्रदेशमा ६ वटा शाखा कार्यालय र १ एक्सटेन्सन काउन्टर, ५ नम्बर प्रदेशमा ४ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेको बताइएको छ ।
संस्थाले सम्पुर्ण बंैकिङ्गसगैं एटिएम, एसएमएस, ई बंैकिङ्ग, ईसिसि,आइपिएस, मोबाइल बंैकिङ्ग, लकर सुविधा, टपअप सुबिधा, विभिन्न विप्रेषन सेवा प्रदान गरिरहेको छ । साथै व्यक्तिगत खाताको लागि ३ लाखसम्मको निक्षेप बिमासमेत गरिएको क्षेत्रीय प्रबन्ध कविज्ञान गौतमले बताए ।